imiphumo yabantu abayi-2. - I-Airbnb
imiphumo yabantu abayi-2.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChristoph - Interhome Group
Indlu eyakhiwe ngamaplanga enamagumbi amabini 60 m2 kumgangatho wesine. Isilingi ethambekileyo, iifenitshala ezintle: igumbi lokuhlala/lokutyela eline-cable TV. Phuma uye kwibhalkoni, kwindawo ejonge kumzantsi. Igumbi eliyi-1 elinokukhanya kophahla kunye neebhedi ezi-2 (iisentimitha eziyi-90, ubude obuyi-200 cm). Vula ikhitshi (ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, iithempleyithi ezine zeglasi ye-ceramic hob, iketile, i-electri...
... umatshini wokwenza ikofu, oomatshini bekofu (Delizio) owongezelelweyo). Ibhafu/WC. Ukwenza indlu ibe shushu phantsi. Ibhalkhoni 5 m2. Ifenitshala ye-balcony. Izixhobo: iayini, isixhobo sokomisa iinwele. I-intanethi (i-wifi, yasimahla).
Kusenokufuneka ubhatale imali eyongezelelekileyo yeenkonzo kwindawo yakho, jonga imithetho yekhaya kunye nencwadi ekuxelela ngendlu ukuze ufumane iinkcukacha.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex "les Vignettes". Embindini weMontana. Endlini: ilifti, igumbi lokugcina iskeyithi, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa i-umble (ukuze usetyenziswe nangabanye abantu, okongezelelweyo). Ipaki yemoto kawonke-wonke ekwi-100 m, eyongezelelekileyo. Thenga i-50 m, ukutya, ivenkile enkulu 80 m, ivenkile yokutyela 10 m, ibhari, ibhikawozi 80 m, i-café 10 m, indawo yokumisa ibhasi "Ycoor" 50 m. I-Minigolf 50 m, iindawo ze-skisport 250 m, indawo yokutyibiliza kwikhephu, indawo yomkhenkce 50 m. Nceda uqaphele: ibhasi yokutyibiliza kwikhephu (yasimahla).